I-Glucocorticosteroids kanye nomphumela wazo emazingeni kashukela > Imithi
Ingabe iDexamethasone Ikhulisa Ushukela Wegazi?
Kungenzeka ukuthi ujwayele isitatimende esimangalisa ukuthi: ushukela ungaqala ngenxa yezidakamizwa! Yebo kungakwenza. Ungakhathazeki, asikhulumi ngezinhlobo ezijwayelekile zesifo sikashukela - i-T1DM ne-T2DM. Eminye imithi iphakamisa ushukela wegazi. Namuhla sizokhuluma ngezidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu kulolu chungechunge - glucocorticoids.
Ama-Glucocorticoids (nawo angama-glucocorticosteroids) angama-hormone adrenal. Umzimba wethu udinga i-glucocorticoids ukuze ikwazi ukubekezelela ukucindezelwa - hhayi nje ukushaqeka ngokomzwelo noma umsebenzi wezinzwa, kodwa futhi nengcindezi ngesikhathi sokuhlinzwa, ukulimala, izifo ezinzima nokuningi. Ngaphezu kwalokho, ama-glucocorticoids angakwazi:
Cindezela umsebenzi wamasosha omzimba.
Ngenxa yalezi zakhiwo, ama-glucocorticoids asetshenziswa kabanzi, futhi kwesinye isikhathi awanakuphindeka:
Ngokunganeleki kwe-adrenal - izinga eliphansi lamahomoni abo,
Kwezifo ezingamahlalakhona ezingapheli (ngokwesibonelo, nge-rheumatoid arthritis kanye ne-systemic lupus erythematosus),
Ngokuphendula kwe-allergic (ngokwesibonelo, nge-asthma ye-bronchial noma i-edema kaQuincke),
Lapho ngifaka izitho nezicubu,
Uma kwenzeka wethukile.
Ngokuya ngalesi sifo, ama-glucocorticoids asetshenziswa ngokuphezulu (amaconsi wamehlo, ama-inhalers, okokugcoba) noma ngokuhlelekile (amaphilisi, izixazululo zemijovo), enkambweni emfushane noma ngokuqhubekayo. Ama-Glucocorticoids ayizidakamizwa ezisebenza kahle, kepha ngokusetshenziswa okuhlelekile anenqwaba yemiphumela engathandeki. Masihlale kulokho okubaluleke kakhulu kithi - ukwanda koshukela wegazi.
Sesivele sithola ukuthi ama-glucocorticoids angama-hormone okucindezela. I-Hypoglycemia, njengoba uyazi, nayo ingcindezi yomzimba, futhi nama-glucocorticoids amisa i-hypoglycemia futhi andise ushukela wegazi. Lokhu kuyindlela edingekayo impela evame ukusebenza kuwo wonke umuntu. Lapho welashwa ngama-glucocorticoids, izinga lamahormone lidlula umkhawulo ongokwemvelo womzimba, futhi izinga le-glucose likhuphuka cishe ngamaphesenti angama-50 amacala. Ngasikhathi sinye, ukumelana nezicubu kwe-insulin kuyanda, okufana nokulimazeka kwe-glucose metabolism yohlobo 2 sikashukela.
Izici ezilandelayo zobungozi zokulimaza i-glucose metabolism ekwelapheni i-glucocorticoids ziyahlukaniswa:
Umthamo omkhulu womuthi,
Ukwelashwa isikhathi eside
Ukhuluphele kanye nokukhuluphala,
Isifo sikashukela sokutholwa esikhathini esidlule
Thayipha isifo sikashukela ezi-2 ezihlotsheni eziseduze.
Kubantu abane-mellitus yesifo sikashukela esivele sikhona, noma ngabe sinenkambo emfushane yokwelashwa kwe-glucocorticoid, ukulawula ushukela kuvama kakhulu. Kepha ungakhathazeki! Into esemqoka ukulungisa umuthi nodokotela wakho futhi noshukela uzobuyela kokujwayelekile futhi.
Ama-glucocorticoids aphakathi nendawo (i-prednisone, i-methylprednisolone) akhuphula ushukela kungakapheli amahora angama-4-8 ngemuva kokungena. Ama-glucocorticoids asasebenza isikhathi eside (dexamethasone, betamethasone) angagcina amazinga kashukela ephezulu aze afike emahoreni angama-24. Ukwanda kweglucose yegazi kufana nomthamo womuthi - lapho umthamo uphakeme, ukhuphuka ushukela.
Vele, kubaluleke kakhulu kubantu abanesifo sikashukela nezici eziyingozi ekuthuthukisweni kwayo ukulawula amazinga kashukela egazini ngesikhathi sokwelashwa nge-glucocorticoids. Uma ungenaso isifo sikashukela, kuzokwanela ukukala isilinganiso sikashukela 1 isikhathi ngosuku, mhlawumbe ngaphambi kwasemini noma isidlo sakusihlwa. Uma usuvele unesifo sikashukela, kuzodingeka ukukala ushukela okungenani izikhathi ezine ngosuku (futhi kaningi ngokwelashwa kwe-insulin!).
Lapho isifo sikashukela sikhula ngenkathi sithatha ama-glucocorticoids, izindlela zokuxilonga azifani kulezo ezijwayelekile: 7 mmol / L futhi nesisu esingenalutho kanye no-11.1 mmol / L nangamahora ama-2 aphezulu ngemuva kokudla. Uma izinombolo ezinjalo bezilungisiwe, kuzodingeka ukuqala ukwelashwa kwe-hypoglycemic.
Lapho ukwelashwa kwe-glucocorticoid kuqediwe, ushukela wezidakamizwa uvame ukunyamalala. Kepha uma kunezici zobungozi, i-glucose metabolism engaphazamiseki ingaphikelela futhi ingene kuloluhlobo 2 sikashukela.
Izici ze-Pharmacological, ifomu, izinkomba, ukulinganiselwa
I-Dexamethasone yi-glucocorticosteroid hormone, ngakho-ke inomthelela omkhulu wokulwa nokuvuvukala, i-immunosuppression, anti-allergic, ithuthukisa ukuzwela kwe-β-adrenergic receptors ku-catecholamines. I-Dexamethasone inomthelela ekuqubukeni kwama-complexes akhuthaza ukuvela kwamamolekyuli wamaprotheni. Ngaphansi kwethonya lomuthi, kwakheka ukwakheka kwamaprotheni e-plasma egazi ne-albhamuin esibindini nasezicubu zezinso. Kuthuthukisa ukwakheka kwezakhi zamangqamuzana ze-lipid. Amaseli amanoni akhiwa ikakhulukazi ebusweni, ibhande lamahlombe, nesisu. Izinga le-cholesterol egazini liyakhuphuka.
Isenzo se-Dexamethasone kushukela wegazi kanje: kuthuthukisa ukumuncwa kwamamolekyulu kashukela emgodini wokugaya ukudla, kukhuphula ukugcwala kwe-glucose egazini, kukhuphule ukwakheka kwama-enzyme wesibindi, ngenxa yokuvuswa kwe-glucogenesis, kunomthelela ekuthuthukisweni kwe-hyperglycemia (ushukela okhuphukile).
I-Dexamethasone inciphisa okuqukethwe kwe-calcium kwizicubu zamathambo, kunciphisa ukuphuma kwe-fluid ne-sodium emzimbeni. Umuthi unciphisa ukuvuvukala ngokunciphisa ukwakheka kwama-cytokines okuvuvukala, ama-leukotrienes, ama-macrophages namanye amaseli omzimba. Iqinisa ukuqina kokuqina kwamaseli, kanye nezakhiwo ezingaphakathi. Ivimbela umsebenzi wamaseli we-T ne-B amasosha omzimba. Yehlisa ukwanda kwama-antibodies athile. Ikhuthaza ukukhishwa kwamaseli we-mast ahlanganisa i-hyaluronic acid, i-histamine.
Yehlisa ukuvuvukala kolwelwesi lwe-mucous lwe-bronchi, kunciphisa ukwakheka kwe-mucus ku-lumen ye-bronchi ne-bronchioles, kunciphisa kancane isikhwehlela. Inqanda ukukhishwa kwe-adrenoglucocorticosteroid hormone. I-metabolism yesidakamizwa idlula kwezicubu zesibindi. Ikhishwa ngohlelo lomchamo. UDexamethasone uyakwazi ukwandisa umfutho wegazi.
Umuthi ukhiqizwa ngefomu lokujova kanye nethebhulethi. Ama-Ampoules anesixazululo akhiqiza umthamo we-1 no-2 ml. I-ampoule eyi-1 (2 ml) iqukethe u-8 mg we-Dexamethasone, ampoule (1 ml) - 4 mg wesidakamizwa. Ithebhulethi eyi-1 iqukethe izinto ezingama-00005 g.
i-systemic pathologies (i-lupus erythematosus, izifo ezinamakhemikhali, i-dermatomyositis, i-scleroderma),
Izifo ezihambisana nobuntwana nezabantu abadala,
i-cerebral edema (isimila, usizi, umsuka wokuhlinzwa, emva kokulashwa ngemisebe),
i-pathology yamehlo ye-allergic, immune etiology,
umsebenzi omubi we-adrenal gland, i-adrenal hyperplasia,
i-autoimmune renal pathology (glomerulonephritis, nephrotic syndrome),
izifo zohlelo lwe-hematopoietic (i-anemia, i-leukemia),
i-pulmonary pathologies (i-asthma ye-bronchial, i-sarcoidosis, i-fibrosis, i-alveolitis),
ukulimala kwesifuba emaphashini, ebuchosheni,
umdlavuza ukulimala kwamaphaphu
i-pathology yokugaya ukudla (isifo sikaCrohn, i-enteritis, i-ulcerative colitis),
i-hepatitis (futhi i-autoimmune),
ukukhuphuka kwe-calcium egazini kuma-oncopathologies,
ukuvimbela ukukhula kwentuthuko yokwenqatshwa kokufakelwa (kanye nezinye izidakamizwa),
lapho wenza izivivinyo zokuxilongwa okwehlukile kwe-adrenal oncology,
ukopha kakhulu kwemvelaphi yokwelapha,
isikhathi ngemuva kokugoma,
isimo sokwehlisa umoya
ukungasebenzi kwesibindi nezinso.
I-Dexamethasone inenombolo enkulu yemiphumela emibi okufanele icatshangwe lapho welapha iziguli.
Imiphumela engathandeki yesidakamizwa:
ingcindezi ephezulu ku-fundus,
ukukhula kwamathambo ezinganeni,
Ngabe i-dexamethasone iyithinta kanjani i-carbohydrate metabolism
Ingabe iDexamethasone Ikhulisa Ushukela Wegazi? Umuthi uyakwazi ukuqinisa ukumuncwa koshukela odongeni lwamathumbu. Uma kuvezwa umuthi, umsebenzi we-enzyme glucose-6-phosphate uyasebenza. Le enzyme isiza ukusheshisa ukungena kwamashukela kusuka esibindini kuya egazini. Ngemuva kwalokhu, ukukhululeka kwama-enzymes wesibindi kuyathuthukiswa. Lezi zinqubo ziholela ekwethulweni kwe-gluconeogeneis kwezicubu zesibindi, okuyisizathu sokwanda koshukela.
Ngesikhathi sokusetshenziswa kwe-Dexamethasone esigulini esinesifo sikashukela, amazinga kashukela wegazi azokhuphuka ngokushesha okukhulu. Ushukela omningi ungaholela ekhefeni le-hyperglycemic. Usongela kakhulu impilo. Kulokhu, isiguli sidinga ukwelashwa.
Uma isiguli sinenhlanganisela yesifo sikashukela kanye nesinye isifo esidinga ukwelashwa ngama-glucocorticosteroid mahormone (GCS), khona-ke ukwelashwa kunqunywa kwizifundo ezimfishane. Ukwelashwa kwenziwa ngempela ngaphansi kokuqashwa kukadokotela, futhi nangaphansi kokuhlolwa kwegazi likashukela. Ngokwenyuka okubukhali koshukela wegazi, ukwelashwa kufanele kukhanselwe.
Bazama ukungasebenzisi i-dexamethasone yesifo sikashukela, ngoba yandisa kakhulu ushukela egazini. Ukusetshenziswa okuqhubekayo kwe-corticosteroids kungaholela kwisifo sikashukela se-steroid. Kuyinto eyamukelekile ukusebenzisa lesi sidakamizwa sikashukela, kodwa kuphela uma okunye ukwelashwa kungasizi. Kungcono ukufaka uDexamethasone elinye ikhambi elisebenzayo. Ukuba khona kwesifo sikashukela i-mellitus (ushukela wegazi ophezulu) kuyinkimbinkimbi kakhulu ekwelashweni kwezifo eziningi, yinkimbinkimbi yokwelapha okubandakanya i-Dexamethasone. Ngakho-ke, namuhla, odokotela batusa indlela yokuphila enempilo ukunciphisa izigameko zesifo sikashukela.
UVidal: https://www.vidal.ru/d drug/dexamethasone__36873
Contraindication ekusebenziseni isidakamizwa
Kuyacaca ukuthi, njenganoma yiluphi olunye ikhambi, lo muthi nawo unezici ezithile eziphikisayo. Isibonelo, ngeke isetshenziswe uma kukhona i-hypersensitivity ethile kuzakhi ezakha ukwakheka kwayo.
Isizathu sokukhansela ukwelashwa nalesi sidakamizwa kungaba uhlobo oluhlukile lokutheleleka. Lokhu kuvame ukwenzeka uma kungekho izidakamizwa ezisebenzayo zokulwa namagciwane ezisetshenziswayo phakathi kwesifo. Ukusetshenziswa kanyekanye kwalesi sidakamizwa nokugoma bukhoma i-antiviral kusenqatshelwe.
Noma ngabe sikhuluma ngakho konke ukuphambana okungenzeka, okubaluleke kakhulu yi-hypersensitivity. Kuzo zonke ezinye izimo, ukusetshenziswa kwomuthi kuphephile impela. Futhi ukwahlulela izinkomba zokusebenza, lo muthi unikezwa cishe njalo, naphezu kokwephulwa okungaba khona.
Ngokuqondene nesikhathi sokugomela, kungcono ukwenqaba ukwelashwa uma isiguli sigonyelwe i-BCG, okungukuthi uma amasonto ayisishiyagalombili esedlule kulolu suku.
Ngokuqapha, udinga ukusebenzisa umuthi lapho isiguli sinegciwane lesandulela ngculaza noma ingculaza.
Uhlu lwe-contraindication lubandakanya noshukela. Kanye nezinye izinkinga ngohlelo lomuntu lwe-endocrine yabantu.
Uhlu oluphelele lwe-contraindication okungenzeka kulula ukuluthola kumiyalo yomuthi.
Ngingathanda ukuhlala ngokuningiliziwe ngemininingwane yokwelashwa kwezifo ezahlukahlukene nalesi sidakamizwa esingelona se-steroidal anti-inflammatory in diabetesics. Sekushiwo ngenhla ukuthi izakhi ezakha umuthi zingasiza ukukhulisa amazinga kashukela egazini.
Lokhu kungenxa yokuthi i-insulin synthesis iyacindezelwa emzimbeni ngemuva kokuthatha umuthi. Ngakho-ke, akunconywa ukuthi usetshenziswe isiguli esinesifo sikashukela sohlobo 2.
Kepha uma kukhulunywa ngeziguli zohlobo lokuqala lwesifo sikashukela, ukwelashwa ngalo muthi kungenzeka ngaphansi kokuqashwa kodokotela okuqinile.
Imiyalo ekhethekile yokusebenzisa
Into yokuqala okufanele uyiqaphele iqiniso lokuthi ukwelashwa ngalesi sidakamizwa kwandisa amazinga kashukela egazi. Ngakho-ke, iziguli ezinesifo sikashukela kufanele zisebenzise umuthi ngokuqapha ngokweqile. Ukwelashwa kwenziwa ngaphansi kokuqashwa okuqinile kwezokwelapha ngesilinganiso esivamile sezinga likashukela, uma kunesidingo, ukwanda komthamo womuthi ophonsa ushukela.
Njengoba kushiwo ngenhla, i-Dexamethasone ayinconyelwanga ukuthi isetshenziswe lapho kukhona ingozi ethile kwezifo ezahlukahlukene. Lokhu kwenzeka kaningi ezimweni lapho isiguli sinezinga eliphansi lokungazetheki.
Isibonelo, lokhu kungenzeka ngesikhathi sokuqalwa kwezifo eziyinkimbinkimbi ezifana nesifo sofuba noma ingculaza. Ezimweni zombili, kubalulekile ukusebenzisa izidakamizwa ezi-immunostimulating ngokuhambisana nalesi sidakamizwa, kanye nalezo ezinomphumela we-antimicrobial.
Kumele kuqashelwe ukuthi ngemuva kokulashwa isikhathi eside ngomuthi ongenhla, okungukuthi amasonto amathathu noma ngaphezulu, kubalulekile ukukhansela umuthi kancane kancane. Ngaphandle kwalokho, kunamathuba aphezulu okuthi ukuntuleka kwesibili kwe-adrenal kungakhuli.
Uma izingane ziphathwa, kubalulekile ukubheka ukuguquguquka komzimba wazo. Ikakhulu uma kukhulunywa ngokwelashwa okuhlala isikhathi eside, izinyanga ezimbalwa noma ngisho unyaka.
Kubalulekile ukulungisa indlela odla ngayo ngesikhathi sokwelashwa. Kungcono ukukhetha lokho kudla okuqukethe inani elikhulu le-potassium. Futhi-ke, ngokwejwayelekile, ukudla kufanele kube okunempilo futhi kucebise amavithamini.
Kubalulekile futhi ukuqapha isimo sezempilo sesiguli ngisho nangemva kokuyeka ukwelashwa. Kwenye indawo kungakapheli unyaka ngemuva kokuqeda umuthi, kufanele kwenziwe ukuhlolwa okujwayelekile ukuze kubhekwe ukuthi kungenzeka ukuthi kuphinde kuqale kabusha.
Ngokuqondene nokwelashwa nomuthi ngesikhathi sokukhulelwa, kufanele kube ngokuqapha okukhulu lapho usondela kulokhu kwelashwa. Kuphela uma umphumela olindelekile kumama olindele udlula kakhulu ebungozini obukhona, kufanele ukuqala ukwelashwa.
Kwi-trimester yokuqala, kungcono ukwenqaba ngokuphelele ukuthatha lo muthi.
Imiyalo yokusebenzisa umuthi iqukethe imininingwane eminingi mayelana nokuxilongwa okuthile lo muthi okufanele usetshenziselwe kona, kanye nomthamo onemininingwane nemiphumela emibi umithi engaba nayo.
Uma sikhuluma ngokuqondile yiziphi izimpawu lo muthi oziqothula, nokuthi yiziphi izifo okufanele zisetshenziswe, kuba sobala ukuthi isibalo sokusebenza somuthi sibanzi impela.
Ukwelashwa nalesi sikhungo kufanele kwenziwe uma kunesidingo sokususa ukuvuvukala okuphezulu okukhona emzimbeni wesiguli, kanye nalapho kudingeka khona ukuvikela ukukhula kwe-edema, hyperemia ne-phagocytosis.
Kuyiqiniso, kufanele kuqashelwe ukuthi lo muthi une-immunosuppression kakhulu, ngakho-ke uvame ukusetshenziselwa ukudambisa izimpawu, futhi ungaqedi izimbangela zalokhu kugula kwangaphambi kwalokho.
Uma usebenzisa umuthi phakathi kwezinqubo ezahlukahlukene zokuvuvukala, uzokwazi ukunciphisa amathuba okuphendula kwezicubu kulokhu kuvuvukala. Kuvinjelwa ukuqongelela kwama-leukocytes, futhi futhi kunezinye izinto ezimbalwa ezimisa inqubo yokuvuvukala iyonke.
Ngaphandle kokuthi umuthi ubuyisela izindlala ze-adrenal, ngaleyo ndlela kwenziwe ngcono ukukhiqizwa kwama-hormone adingekayo emzimbeni, akuvamile ukusetshenziswa koshukela. Lokhu kungenxa yokuthi lo muthi usiza ukukhuphula amazinga kashukela egazini. Uma, noma kunjalo, kwenziwa isinqumo sokusebenzisa lo muthi ekwelapheni iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 1, kuyadingeka-ke ukwandisa umthamo wezidakamizwa ezokwehlisa ushukela futhi njalo ugadle izinga le-glucose egazini lesiguli.
Izinkomba eziphambili zokusebenzisa umuthi yilezi:
ukuntuleka kwe-adrenal (acute),
ukungasebenzi kahle kwe-adrenal, okuvela ngenxa yokukhanselwa okungazelelwe kweqembu elithile lezidakamizwa,
ukwehluleka okuyisisekelo noma kwesibili kwalesi sitho.
Ngaphezu kwalokho, ingabekwa futhi uma isiguli sine-hyperplasia ye-cortex yalesi sitho noma i-subacute thyroiditis. Umuthi uyasebenza ekushisweni kwanoma yiluphi uhlobo, okuthi uma ezinye izidakamizwa ze-vasoconstrictor zingasebenzi. Ukuxilongwa akuyona into eyehlukile, kuhlangene ne-edema yamakhemikhali, ngokwesibonelo, ukulimala kobuchopho obahlukahlukene, i-meningitis, i-encephalitis nezinye izilonda ezifanayo.
Kwezinye izimo, lo muthi ungasetshenziselwa i-bronchospasm enzima eyenzeka ngesikhathi sokuthuthukiswa kwesifo somoya (bruschial asthma). Kuyaphawuleka futhi ukuthi kuyaphumelela uma kubhekwa imbandezelo ehlukahlukene yokungezwani komzimba, ikakhulukazi, ezimeni ezinzima zalesi sifo, ngenxa yalokho okungabhekwa njengesinye sezidakamizwa ezingasetshenziswa uma kunezimpawu zokungalingani zesifo sikashukela i-mellitus. Izifo ze-rheumatic nazo zingaba isizathu sokusetshenziswa.
Ngokuvamile, lolu hlu lubanzi impela. Kodwa-ke, ungasebenzisa umuthi kuphela ngemuva kokuhlolwa isiguli ngokuphelele. Awukwazi ukuqala ukwelashwa ngokwakho, udokotela kufanele akunikeze umuthi.
Ukubuyekezwa kokusetshenziswa kwomuthi
Kunezibuyekezo eziningi ku-Intanethi ezenza ukuthi kuqondwe ukuthi yiziphi izimo lapho kungcono ukwenqaba ukusebenzisa lo muthi, futhi lapho kusebenza kakhulu.
Isibonelo, ezinye iziguli zithi ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside umuthi, babona imiphumela emibi njengokungahambi kahle kokuya esikhathini kanye nokuthuthukiswa kokungasebenzi kahle kwe-adrenal. Ukunakekelwa okukhethekile kufanele kuthathwe lapho welapha iziguli ezinesifo sikashukela. Kusukela, izakhi zomuthi zinciphisa kakhulu ukubekezelelwa kwe-glucose. Uma usebenzisa umuthi isikhathi eside kakhulu, khona-ke ukunqandwa kokukhula kungabonakala ezinganeni.
Imiphumela emibi evela emsebenzini wenhliziyo nayo iyenzeka.
Ukubuyekezwa kweziguli ezisebenzise lo muthi ngesikhathi sokwelashwa kwezifo zazo kukhombisa ukuthi kusebenza kakhulu kumathambo ehlukahlukene e-septic, kanye nalapho kuhanjiswa ngomlomo emalungeni angazinzile.
Kuliqiniso, ukubuyekezwa okufanayo kukhombisa nokuthi umuthi ungayilimaza impilo yesiguli uma inezifo ezahlukahlukene zomgudu wesisu, kanye nezifo zokukhunta, i-herpes, inkukhu noma isimungumungwane.
Vele, njengakwezinye izimo, ungathola futhi zombili izibuyekezo ezinhle nezingalungile lapha. Kepha, naphezu kwenqwaba yemiphumela emibi, ukusebenza ngempumelelo kwalo muthi kuphakeme kunayo yonke imiphumela emibi. Into esemqoka ukwenza ukwelashwa ngaphansi kokuqashwa ngudokotela ngokuqinile.
Izindleko zomuthi kanye nezimpawu zawo
Uma sikhuluma ngezindleko zalo muthi, kuyabiza impela. Vele, konke kuncike kumkhiqizi othile kanye nefomu lokukhululwa, kepha ngokuvamile intengo yokufaka ayidluli ama-ruble ayi-100.
Kuliqiniso, kukhona okuhlukile, isibonelo, iDexamethasone-Vial evela enkampanini CCSPiOui ibiza ama-ruble angama-254. Kuleli banga lentengo kukhona nomuthi onikelwe ngumenzi ovela eNdiya naseSlovenia, kulokhu izindleko zifinyelela kuma-ruble angama-215, kepha iphakethe lelo lizoqukatha ama-ampoules angama-25, ngalinye lawo liqukethe into eyi-1 ml yento yokwelapha ene-4 mg.
Ngokuvamile, kufanele kwaziwe ukuthi zonke izidakamizwa ezivela kubakhiqizi abahlukahlukene, ezithengiswa emaphaketheni aqukethe ama-ampoules angama-25 we-ml eyodwa ngayinye, zisukela kuma-ruble angama-212 kuya kwangama-225.
Uma sikhuluma ngomuthi, othengiswa ngohlobo lwamaconsi wamehlo, khona-ke izindleko zawo ngokuvamile azidluli ama-ruble angama-40. Kepha lapha sikhuluma ngesixazululo esinenqwaba ye-0,1%. Vele, intengo yayo ingaba ngaphezulu, konke kuncike kumthamo womthamo.
Kumele kuqashelwe ukuthi ngaphambi kokuqala ukusebenzisa umkhiqizo wezokwelapha, kungcono ukubonisana nodokotela wakho ngaphambi kwesikhathi bese ucacisa indlela yokukhishwa komuthi owuthandayo kanye nokugxiliswa kwawo, bese uthola kuphela lowo muthi. Ividiyo ekulesi sihloko izokhuluma ngomuthi.
Ukulungiswa kwemithi kungokwesigaba se-glucocorticosteroids enemiphumela yokulwa ne-allergic, anti-inflammatory, immunosuppression kanye ne-antitoxic.
I-Dexamethasone ivimbela noma inciphise izimpawu zokusabela komzimba futhi idambise izimo zokwethuka. Ngosizo lwedivaysi echaziwe yezokwelapha, inani lamaprotheni ku-plasma liyancishiswa kanti ne-catabolism yayo kwezicubu zemisipha iyathuthukiswa. "I-Dexamethasone" isiza ukwandisa ukungena kwe-glucose kusuka esibindini iye egazini, igcina ama-ion e-sodium namanzi emzimbeni, ngenkathi ivuselela ukuphuma kwe-potassium futhi kunciphisa ukumuncwa kwe-calcium emgodini wokugaya ukudla. I-Dexamethasone iyakwazi ukukhulisa umfutho wegazi, inciphise ukuqina kwezindonga zemithambo yegazi kanye nokwenzeka kokukhiqizwa kwezicubu ezithambile.
Okuqukethwe okuphezulu kwe- "Dexmetasone" esegazini kuphawulwa ngemizuzu emi-5 ngemuva kokuphathwa kwe-iv nemizuzu engama-60 ngemuva kokulawulwa kwe-iv. Umuthi ubiliswa ikakhulukazi esibindini futhi ingxenye yawo encane kuphela - ezinso nakwezinye izitho zangaphakathi. Izakhi zomkhiqizo wemithi "Dexamethasone" zithukululwa ngomsebenzi wezinso emini.
Umuthi ukhiqizwa ngendlela yesisombululo esenzelwe ukuphathwa ngomlomo. Iqukethe ukwakheka kwayo into esebenzayo - i-dexamethasone sodium phosphate nezinto ezinjalo ezisizayo:
Ukusebenza kwesidakamizwa "Dexamethasone" kubonakala ekwelapheni ama-pathologies alandelayo:
Isidakamizwa sikhonjiswa ukungasebenzi kahle komzimba we-adrenal cortex.
ukuntuleka emzimbeni we-vithamini B12,
izifo ezingamahlalakhona ezingapheli zomgudu wokuphefumula,
isifo esisehlelweni lwezicubu ezitholakalayo zemvelo ye-autoimmune, eqhubeka ngesimo esingamahlalakhona,
ukwehla kwamanani we-platelet kanye namaseli amhlophe egazi,
ukuntuleka kwe-hormone ye-thyroid eyingozi ne-subacute,
isifo esibonakaliswa ngokubhujiswa kwamasosha omzimba amangqamuzana akho abomvu egazi,
Isifo sokuhluleka kwethambo,
ukuvuvukala okukhulu kwesikhumba
ukungasebenzi kwendalo kwe-adrenal cortex.
Isifo sikashukela siwuthinta kanjani umzimba?
Ezigulini ezitholakale zinesifo sikashukela ngesikhathi sokuhlolwa kokuxilongwa, umuthi wezidakamizwa owaziwa ngokuthi yi-Dexamethasone unqatshelwe.
Imikhawulo ekusetshenzisweni ingenxa yamandla emithi ukuthinta i-glucose egazini lesiguli. Into esebenzayo yesidakamizwa inyusa okuqukethwe kwe-glucose ku-plasma, okungathandeki kakhulu kushukela. Uma ukusetshenziswa kwe-Dexamethasone kweziguli ezinesifo sikashukela akunakugwenywa, khona-ke ukwelashwa kufanele kwenziwe ngokuqapha ngokweqile, ngaphansi kokuqashwa ngokuqinile kodokotela futhi kuncike ekulinganisweni okujwayelekile kwamazinga kashukela. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ngesikhathi ukwelashwa ngomuthi we-glucocorticosteroid, kunganda umthamo womuthi olawula ushukela kwabanesifo sikashukela.
Akunconyelwe ukusebenzisa i- "Dexamethasone" ezigulini ezinezifo nemibandela elandelayo:
isifo sokuwohloka kwamathambo
uhlobo oluthuthukile lwamagciwane asebusweni, amagciwane kanye nokukhunta,
isikhathi sokuzala nokukhulelwa,
hypersensitivity ezingxenyeni zokwakha zomuthi.
Ngokuqapha okwandayo, udinga ukusebenzisa i- "Dexamethasone" yesilonda se-peptic, i-gastritis, i-parasisic pathology yemvelo ehlukahlukene. Umuthi ungazilimaza iziguli ezinezimo zokugonywa, izifo ze-CCC, i-endocrine pathologies kanye nomsebenzi okhubazekile wezinso nesibindi. Ebuntwaneni, ukuthatha lo muthi kuvunyelwe kuphela njengoba kuyalelwe udokotela ngemuva kokunaka zonke izingozi ezingaba khona.
I-Dexamethasone ingadala imiphumela emibi elandelayo:
Imiphumela emibi ingenzeka ngendlela yama-hiccups.
Ukwehla kokuxineka kwe-calcium, potassium, i-sodium egazini,
isifo sikashukela se-steroid
ukuvuvukala kwamanyikwe, i-esophagus,
ukumbiwa ngokweqile kwe-calcium,
amazwe acindezelayo nokukhathazeka,
Ukweqisa kwe- "Dexamethasone" kushukela
Uma usebenzisa i- "Dexamethasone" ngemithamo ephezulu, kunengozi yokuthola ukudakwa komzimba nengxenye yawo esebenzayo. Uma kwenzeka kweqisa ngokweqile, iziguli zingabona ukwanda kokubonakaliswa kwezimpawu eziseceleni. Umuthi awunayo i-antidote ethize, ngakho-ke, ukwesekwa okuvumelanayo nokubonakalayo kuyenziwa.
Yikuphi ukudla okwandisa ushukela wegazi
Ukudla okuningi kuqukethe ama-carbohydrate, okuthi uma kudakiwe kuthinte amazinga kashukela egazini. Isikhombi esilinganisa umthwalo we-carbohydrate wokudla ubizwa ngokuthi yi-glycemic index (GI). Ku-glucose emsulwa, ilingana amayunithi ayi-100, futhi yonke eminye imikhiqizo ingaba ne-GI isuka ku-0 iye ku-100. Le nkomba enenani elivela ku-0 iye ku-39 ibhekwa njengephansi, ukusuka ku-40 kuye ku-69 - okuphakathi, nangaphezulu kwama-70 - phezulu. Ukudla okwandisa ushukela wegazi ngokushesha kungukudla okunenkomba ephezulu ye-glycemic, yize okunye ukudla okune-GI ephakathi nakho kubonisa lo mphumela. Kungakho abanesifo sikashukela kudingeka bazi ukuthi yikuphi ukudla okuphakamisa ngokushesha amazinga kashukela bese uzama ukukususa ekudleni.
Umphumela wokudla kumazinga kashukela
Ukudla okuningi kunama-carbohydrate ekwakhekeni kwawo, ngakho-ke ngandlela thile kuthinta ushukela wegazi. Ezinye zazo ziyandisa ngokushelela futhi kancane, ngakho-ke ukusetshenziswa kwazo akukuthinti isimo samanyikwe. Abanye bakhuphula kakhulu amazinga eglucose, okulimaza kakhulu ngisho nakumuntu ophilile, futhi ikakhulukazi onesifo sikashukela. Ukuphakama kwenkomba ye-glycemic yesitsha, ngokushesha ngemuva kokungenisa kuzodala ukukhuphuka kwezinga likashukela.
Njengoba unikezwe imiphumela elimazayo yokudla enomthwalo we-carbohydrate ophezulu, kuyalulekwa ukwenqaba ukusetshenziswa kwawo okuvamile ngisho nakubantu abaphilile ngokuphelele. Kwabanesifo sikashukela, lokhu kumane kudingekile, noma ngabe hlobo luni lwesifo. Noma ngabe welapha i-insulin, awusoze wadla futhi wazibandakanya ekudleni okumnandi, ngethemba lomjovo. Ukwehluleka ukuhambisana nokudla kuholela ekuwohlokeni kwenhlalakahle yesiguli kanye nesidingo sokukhulisa umthamo wehomoni ophathisiwe. Isisekelo sokudla kufanele kube ukudla okunempilo: imifino, okusanhlamvu, ezinye izithelo, inhlanzi enamafutha amancane nenyama edliwayo. Izinkomba ze-Glycemic zezinhlobo ezithile zokudla zethulwe etafuleni 1.
Ithebula 1. I-Glycemic indices yeminye imikhiqizo
Izithelo ziqukethe ama-carbohydrate alula futhi ayinkimbinkimbi. Ezinye zazo futhi zinokudla okunamafutha amaningi okudla okwehlisa ijubane ukuqhekeka kashukela ngakho-ke akubangeli i-hyperglycemia. Izithelo zezithelo zivunyelwe kwabanesifo sikashukela, kepha ngokuya ngokwakheka kwamakhemikhali nokuqukethwe kwama-caloric, amazinga okuvumeleka okuvumelekile kwezinhlobo ezahlukahlukene angahluka. Kukhona nezithelo ezidinga iziguli ukuba zingafakwa kokudla ngenxa yomthwalo wazo we-carbohydrate omningi:
Izithelo ezomisiwe (ikakhulukazi amakhiwane, izinsuku nama-apricots omisiwe) aphezulu kumakhalori kanye ne-GI ephezulu, ngakho-ke isifo sikashukela asifaneleki ukudliwa. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezigulini zohlobo lwesibili lwalesi sifo nabesifazane abanesifo sikashukela sokukhulelwa abaphoqelelwa ukulandela ukudla okuqinile.
Cishe yonke imifino ingemikhiqizo ephansi noma ephakathi ye-GI, ngakho-ke kufanele kube yisisekelo sokudla kweziguli kwansuku zonke. Kodwa-ke, ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwesitashi, kungcono ukuthi abanesifo sikashukela bazilinganisele ekudleni amazambane (ungakudla, kepha kungcono ukukwenza lokhu kungabi ngaphezu kwezi-2 ngeviki). Ama-beet kanye nommbila aqukethe ushukela omningi ekwakhiweni kwawo, ngakho-ke nawo adinga ukukhutshwa futhi angahlanganiswa neminye imikhiqizo equkethe ama-carbohydrate.
Ushukela nemikhiqizo ekuqukethe
Ushukela uwumkhiqizo ongu-1 1 okufanele uhlukaniswe ngokuphelele ekudleni komuntu ogulayo. Kubangela ukwanda okusheshayo kweglucose yegazi futhi kuvuse ukukhula kwezifo ezinzima zesifo. Iziguli, ngaphandle kwezincomo zikadokotela, eziqhubeka nokudla ushukela nemikhiqizo eziqukethe, maduze zizokwazi ukuthi zilimaza kangakanani. Ngenxa yamaswidi, abanesifo sikashukela baqala ukuba nezinkinga eziyingozi zesifo sikashukela, phakathi kwazo okukhona:
i-polyneuropathy (ukwephula i-nerve conduction),
i-retinopathy (i-retinal pathology),
Kuliqiniso, umzimba udinga i-carbohydrate, kepha kungcono ukungakutholi ekudleni okumnandi, kepha kusuka kwimifino enempilo nezinhlamvu. Ushukela ocwengiwe awulethi noma yini ewusizo emzimbeni, umane uthuthukisa ukunambitheka kokudla. Amaswidi ajwayelekile kwabanesifo sikashukela futhi kufanele afakwe esikhundleni sezithelo zemvelo, amantongomane kanye nama-dessert kusuka koshizi onamafutha amancane. Uma kungekho zinkinga zesifo, kwesinye isikhathi isiguli sivunyelwe ukudla uju oluncane.
Yikuphi ukudla okhulisa ushukela wegazi ikakhulukazi ngokushesha ngaphandle koshukela omsulwa? Lokhu kufaka phakathi isinkwa esimhlophe, amakhekhe, ushokoledi, amakhukhi, amalambu, izinto zokupheka ezinosawoti ezenziwe ngofulawa kakolweni wekhrimiyamu, ama-potato chips, ukudla okusheshayo nokudla okulula. Ushukela “ungacasha” kuleyo mikhiqizo enambitheka kamnandi kakhulu. Isibonelo, kuningi ezitolo zesitolo, amakhekhe, ama-marinade. Ngaphambi kokukhetha ukudla, udinga ukufunda ngokucophelela ukwakheka kwawo, uhlole okuqukethwe kwekhalori nenani lama-carbohydrate akulo, ngoba yilokhu ngqo okuthinta ushukela wegazi.
Izinhlamvu eziningi zikuluhlu oluvunyiwe lwemikhiqizo yabanesifo sikashukela. Banenkomba ye-glycemic ephakathi nendawo, inani elanele lamandla nokwakheka kwamakhemikhali. Izinhlamvu ezisebenzayo zifaka amabele, ukolweni, i-oats engashisiwe, i-buckwheat, i-bulgur. Ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi ekwakhekeni kwawo aphuka kancane, ngenxa yalokho, ngemuva kokusetshenziswa kwawo, izinga le-glucose egazini likhuphuka kancane.
Phakathi kokusanhlamvu okuthinta kabi umzimba wesifo sikashukela, umuntu angahlukanisa i-semolina nelayisi elimhlophe. Izitsha ezilungiselelwe kusuka kubo zinamakhalori aphezulu, aqukethe ama-carbohydrate amaningi asheshayo, futhi ngokusetshenziswa njalo zivusa ukukhuluphala. Alunazinto ezibalulekile zemvelo, zimane zigcwalisa umzimba ngamakhalori "angenalutho", futhi lokhu kuyinto engathandeki kakhulu kwisifo sikashukela.
Iziguli ezinesifo sikashukela zingadla kuphela imikhiqizo yobisi ebilisiwe enamaphesenti amancane wokuqukethwe kwamafutha. Kungcono ukulahla ubisi ngokuphelele, ngoba kugaywe isikhathi eside futhi kubangele ukungakhululeki esiswini. Njengoba i-metabolism igxiliwe ku-mellitus yesifo sikashukela, ubisi lungathinta kabi i-pancreas, amathumbu nezinye izitho zesistimu yokugaya ukudla.
Ama-yogurts anamafutha anama-flavourings nama-filters wezithelo ekwakhiweni kwawo angavusa ukwanda koshukela. Kwenzeka okufanayo kuma-pastd curd anama-filler. Noma ngabe i-fructose ingezwe ushukela esikhundleni sikashukela, ayifanele labo abanesifo sikashukela. Ukusetshenziswa kaningi kwalokhu okuthatha indawo kashukela kuholela ekukhuluphiseni ngenxa yokuqukethwe kwayo kilojoule ephezulu kanye nekhono lokukhulisa isifiso sokudla.
Ingabe lokhu kudla kuyingozi ngaso sonke isikhathi?
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ukudla okunenqwaba yama-carbohydrate asheshayo ekwakhiweni akufanele kube khona etafuleni likashukela. Kepha kunezimo lapho kungasindisa khona impilo nempilo yesiguli. Ngokuqalwa kwe-hypoglycemia (ukwehla okungjwayelekile kwe-glucose yegazi), le mikhiqizo inganikeza usizo lokuqala futhi ivikele isiguli ezingxakini ezinkulu. Uma umuntu onesifo sikashukela ethola ukuthi izinga likashukela lehlile ngesikhathi, ukuze enze isimo sakhe sijwayelekile, njengokwenqubo, kwanele ukudla isangweji ngesinkwa esimhlophe, ibha enempilo noma uphuze ingilazi kashukela.
Ngenxa yokuqhekeka okusheshayo koshukela olulula, ukugcwala koshukela egazini kuphakama, futhi isiguli sizizwa kahle. Uma lezo zinyathelo zingathathwanga ngesikhathi, umuntu angadinga ukungenelela kwezokwelashwa nokulashwa esibhedlela. I-Hypoglycemia yisimo esiyingozi esisongela impilo ngaphandle kwe-hyperglycemia (ushukela wegazi ophezulu). Kungakho odokotela bancoma ukuthi zonke iziguli zihlale ziphatha i-glucometer nokudla okune-carbohydrate okusheshayo ukusiza ezimeni eziphuthumayo.
Ukuba nomqondo wokuthi yikuphi ukudla okungakhulisa amazinga kashukela egazi, umuntu angahlela kalula imenyu izinsuku eziningana kusengaphambili. Kungcono ukuthi ukudla okuphekwe yikhona okuphekwe yizitsha eziphuke kancane futhi zidonswe emzimbeni. Bakhulisa okuqukethwe kwe-glucose egazini ngokushelela nangokomzimba, ngaphezu kwalokho, ngemuva kokusebenzisa, umuzwa wendlala awaveli ngokushesha okukhulu.
Isifo sikashukela nezomlenze. Isifo sikashukela sihlukumeza imilenze - ukwelashwa
Isifo sikashukela sivame ukunika izinkinga emilenzeni. Izinkinga ezinyaweni kuyo yonke impilo zenzeka ku-25-35% wabo bonke abanesifo sikashukela. Futhi lapho isiguli siguga, kulapho amathuba okuba khona kwawo. Izifo zemilenze ezinesifo sikashukela ziletha inkathazo enkulu ezigulini nakodokotela. Imilenze ilimala nesifo sikashukela - ngeshwa, isisombululo esilula kule nkinga asikabikho. Kuzofanele ngenze konke okusemandleni ukuze ngilashwe. Ngaphezu kwalokho, udinga ukwelashwa kuphela ngudokotela ochwepheshe, futhi akunakuthi "amakhambi abantu". Kulesi sihloko, uzofunda okufanele ukwenze. Izinjongo zokwelashwa:
Susa usizi emilenzeni, futhi okungcono kakhulu - Susa konke,
Gcina amandla okuhamba "uwedwa."
Uma ungakunaki ukuvimba kanye nokwelashwa kwezifo zikashukela emilenzeni, isiguli singalahlekelwa yinzwane noma unyawo lonke.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, imilenze ilimala ngoba i-atherosclerosis iphumela ekunciphiseni i-lumen emithanjeni yegazi. Izicubu zomlenze azitholi igazi elanele, “i-suffocate” futhi ngenxa yalokho zithumela amasiginali obuhlungu. Ukuhlinzwa ukubuyisa ukugeleza kwegazi emithanjeni yamaphethelo aphansi kungadambisa izinhlungu futhi kuthuthukise ikhwalithi yempilo yesifo sikashukela.
Kunezimo ezimbili eziyinhloko zezinkinga zomlenze onesifo sikashukela:
Ushukela wegazi ophakeme ngokungapheli uthinta imicu yezinzwa, futhi bayeka ukuqhuba izifiso. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-neuropathy yesifo sikashukela, futhi ngenxa yako, imilenze ilahlekelwa umuzwa wayo.
Imithambo yegazi ephakela imilenze ivalekile ngenxa ye-atherosulinosis noma ukwakheka kwejazi legazi (i-damu). I-Ischemia iyakhula - indlala yomoya-mpilo yezicubu. Kulokhu, imilenze ihlala ilimala.
I-Atherossteosis: ukuvimbela kanye nokwelashwa. I-atherosclerosis yemikhumbi yenhliziyo, ubuchopho, amasheya aphansi.
Ukuvimbela ukushaya kwenhliziyo nokushaywa unhlangothi. Izici zobungozi nokuthi ungaziqeda kanjani.
Umonakalo wezinzwa ngenxa ye-glucose ephezulu yegazi ubizwa ngokuthi yi-diabetesic neuropathy. Le nkinga yesifo sikashukela iholela eqinisweni lokuthi isiguli siphelelwa amandla okuzwa ukuthinta imilenze yakhe, izinhlungu, ingcindezi, ukushisa nokubanda. Manje uma alimala umlenze wakhe, ngeke ayizwe. Iningi labanesifo sikashukela abakulesi simo banezilonda emilenzeni nasezinyaweni zezinyawo, ezipholisa isikhathi eside futhi zilukhuni.
Uma izinzwa zemilenze zibuthakathaka, khona-ke amanxeba nezilonda akubangeli buhlungu. Noma ngabe kukhona ukuhlakazeka noma ukwaphuka kwamathambo onyawo, khona-ke cishe kuzoba buhlungu. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-diabetesic foot syndrome. Njengoba iziguli zingabuzwa ubuhlungu, eziningi zazo zivila kakhulu ukulandela izincomo zikadokotela. Ngenxa yalokhu, amagciwane ayanda ezilondeni, futhi ngenxa ye-gangrene, umlenze uvame ukunqunywa.
Isifo se-aripheral artery isifo sikashukela
Uma ubuningi bemithambo yegazi yehla, izicubu zemilenze ziqala 'ukubulawa yindlala "futhi zithumele amasiginali wezinhlungu. Ubuhlungu bunokwenzeka ekuphumuleni noma kuphela lapho uhamba. Ngomqondo othile, uma imilenze yakho ilimala ngesifo sikashukela mihle kakhulu. Ngoba izinhlungu emilenzeni zivuselela onesifo sikashukela ukubona udokotela futhi alulame ngamandla akhe onke. Esihlokweni sanamuhla, sizocubungula nje isimo esinjalo.
Izinkinga ngemithambo yegazi ephakela imilenze ibizwa nge- “peripheral artery isifo”. I-Peripheral - isho kude nesikhungo. Uma i-lumen emikhunjini incishisiwe, khona-ke imvamisa ngesifo sikashukela, i-claudication eyenzeka ngezikhathi ezithile. Lokhu kusho ukuthi ngenxa yobuhlungu obukhulu emilenzeni, isiguli kufanele sihambe kancane noma siyeke.
Uma isifo se-artery sangaphakathi sihambisana ne-neuropathy yesifo sikashukela, khona-ke izinhlungu zingaba mnene noma zingabikho ngokuphelele. Ukuhlanganiswa kokuvaleka kwemithambo kanye nokulahleka kokuzwela kobuhlungu kukhulisa kakhulu amathuba okuba onesifo sikashukela kuyodingeka ukuthi anqume imilenze eyodwa noma yomibili. Ngoba izicubu zemilenze ziyaqhubeka nokuwohloka ngenxa “yokubulawa yindlala,” noma isiguli singabuzwa ubuhlungu.
Yikuphi ukuvivinya okwenzayo uma imilenze yakho ilimala ngesifo sikashukela
Kuyadingeka ukuhlola ngokucophelela imilenze nezinyawo zakho nsuku zonke, ikakhulukazi ekugugeni. Uma ukuhamba kwegazi emithanjeni kuphazamisekile, khona-ke ungazibona izimpawu zokuqala zangaphandle zalokhu. Izimpawu zesigaba sokuqala sesifo se-artery yangaphakathi:
isikhumba emilenzeni siyoma
mhlawumbe kuzoqala ukubhoboka, kuhlangene ne-itch,
i-pigmentation noma i-depigmentation ingavela esikhunjeni,
emadodeni, izinwele emlenzeni ongezansi ziba mpunga bese ziphuma ngaphandle,
isikhumba singashintsha siqhakaze futhi sibande lapho singathintwa,
noma okuphambene nalokho, ingafudumala futhi ithole umbala we-cyanotic.
Udokotela onolwazi angahlola ngokuthinta ukuthi uluhlobo luni lokudonsa isiguli emithanjeni esekela izicubu zemilenze. Le ndlela ithathwa njengeyona elula futhi ebiza kakhulu yokuthola ukuphazamiseka kokujikeleza kwegazi. Ngesikhathi esifanayo, i-pulsation ku-artery iyama noma incipha kakhulu kuphela lapho i-lumen yayo incishiswe ngama-90% noma ngaphezulu. Isikhathi sekwephuze kakhulu ukuvikela ukulamba kwezicubu.
Ngakho-ke, basebenzisa izindlela zocwaningo olubucayi kakhulu besebenzisa imishini yezokwelapha yesimanje. Isilinganiso sokucindezela kwe-systolic ("ephezulu") emithanjeni yomlenze ophansi kanye ne-brachial artery kubalwa. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-ankle-brachial index (LPI). Uma kuluhlu lwe-0.9-1.2, khona-ke ukuhamba kwegazi emilenzeni kubhekwa njengokujwayelekile. Ukucindezela kwe-artery yeminwe nakho kuyalinganiswa.
Inkomba ye-ankle-brachial inikeza imininingwane engamanga uma ngabe imikhumbi ithinteka yi-atherosulinosis yeMenkeberg, okungukuthi, imbozwe “ngezinga” lokungena ngaphakathi. Ezigulini esezikhulile, lokhu kwenzeka kaningi. Ngakho-ke, izindlela ziyadingeka ezinikeza imiphumela efanelekile futhi ezinzile. Lokhu kubaluleke kakhulu lapho kuxazululwa inkinga yokuhlinzwa ukuze kubuyiswe i-vasency patency ukuze imilenze ingabe isalimala.
I-transcutaneous oximetry iyindlela engenabuhlungu ekuvumela ukuthi uhlole ukuthi izicubu zigcwele kahle kanjani i-oxygen. I-Transcutaneous isho “esikhunjeni.” Kusetshenziswa inzwa ekhethekile ebusweni besikhumba, okwenza isilinganiso.
Ukunemba kokuhlola kuya ngezinto eziningi:
isimo sohlelo lwamaphaphu lwesiguli,
izinga le-hemoglobin kanye nokukhishwa kwenhliziyo,
ukuhlushwa umoya-mpilo emoyeni,
ubukhulu besikhumba okufakwa kuyo inzwa,
ukuvuvukala noma ukuvuvukala endaweni yokulinganisa.
Uma inani elitholile lingaphansi kuka-30 mm RT. Ubuciko., Khona-ke ischemia (indlala yomoya-mpilo) yemilenze iyatholakala. Ukunemba kwendlela ye-transcutaneous oximetry akuyona ephezulu. Kepha isasetshenziswa, ngoba ibhekwa njengeyofundisayo futhi ayizidali izinkinga iziguli.
I-Dexamethasone yesifo sikashukela
Umuthi "Dexamethasone" unezindlela eziningi zokuphikisana nohlobo lwe-II yesifo sikashukela, njengenye yazo.
Lesi sidakamizwa yi-hormone yokwenziwa ye-adrenal cortex, okumele ithathwe ngokuqinile njengokusho kwezimpawu.
Ngakho-ke, ukuze kungakhuli isimo, abesifo sikashukela kufanele baxhumane nesikhungo sezokwelapha futhi baxhumane nodokotela ofanele ngaphambi kokuqala ukwelashwa kwe-Dexamethasone.
Isifo sikashukela seSteroid: izimpawu, izindlela zokuxilonga nezindlela zokwelashwa
Imbangela yokukhuphuka kweglucose kungaba ukweqiwa isikhathi eside kwama-steroid egazini. Kulokhu, ukuxilongwa kwesifo sikashukela se-steroid kwenziwa.
Ngokuvamile, ukungalingani kuphakama ngenxa yemithi ebekiwe, kodwa futhi futhi kungaba yingxaki yezifo eziholela ekwandeni kokukhululwa kwama-hormone.
Ezimweni eziningi, ushintsho lwe-pathological ku-metabolism wama-carbohydrate luyaphenduka, ngemuva kokuhoxiswa kwezidakamizwa noma ukulungiswa kwesimbangela sesifo, ziyanyamalala, kepha kwezinye izimo zingaqhubeka ngemuva kokwelashwa.
Ama-steroid ayingozi kakhulu kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2. Ngokwezibalo, ama-60% eziguli kufanele athathe amanye esikhundleni se-hypoglycemic agents nge-insulin therapy.
Isifo sikashukela seSteroid - siyini?
I-Steroidal, noma eyenziwe izidakamizwa, isifo sikashukela yisifo esiholela ku-hyperglycemia. Isizathu salokhu umphumela ongemuhle wama-glucocorticoid mahormone, asetshenziswa kabanzi kuwo wonke amagatsha ezokwelapha. Banciphisa umsebenzi wamasosha omzimba, babe nemiphumela yokulwa nokuvuvukala. I-Glucocorticosteroids ifaka iHydrocortisone, iDixamethasone, iBetamethasone, iPrednisolone.
Kafushane nje, kungabi ngaphezu kwezinsuku ezingama-5, ukwelashwa ngalezi zidakamizwa kubekelwe izifo:
I-COPD yisifo samaphaphu esingamahlalakhona
gout esiteji esibuhlungu.
Isikhathi esijana, izinyanga ezingaphezu kweziyi-6, ukwelashwa kwe-steroid kungasetjenziswa kwezifo zangaphakathi zephyumonia, izifo ze-autoimmune, ukuvuvukala kwamathumbu, izinkinga zesikhumba, kanye nokufakelwa kwezitho.
Ngokwezibalo, izehlakalo zokuthola isifo sikashukela ngemuva kokusetshenziswa kwalezi zidakamizwa azidluli kuma-25%. Isibonelo, ekwelashweni kwezifo zamaphaphu, i-hyperglycemia ibonwa ku-13%, izinkinga zesikhumba - ku-23,5% yeziguli.
Sawubona Igama lami ngingu-Alla Viktorovna futhi angisenaso isifo sikashukela! Kungithathe izinsuku ezingama-30 nama-ruble ayi-147 kuphela.ukubuyisa ushukela kokujwayelekile futhi ungaxhomekeki kwezidakamizwa ezingenamsebenzi ngenqwaba yemiphumela emibi.
>>Ungayifunda ngokuningiliziwe indaba yami lapha.
Ingozi yesifo sikashukela se-steroid yanda ngo:
isifiso sokuzalwa sokuthayipha isifo sikashukela sesi-2, izihlobo zomndeni wokuqala onesifo sikashukela,
isifo sikashukela sokukhulelwa okungenani ekukhulelweni okukodwa,
ukukhuluphala, ikakhulukazi isisu
Ukuphakama umthamo wemithi othathwe, kuyanda amathuba okuba nesifo sikashukela:
Umthamo we-hydrocortisone, mg ngosuku Ingozi eyandayo yezifo, izikhathi
Kukhona ubudlelwano obuqondile be-multicomponent phakathi kokusetshenziswa kwe-glucocorticoid kanye nokuthuthukiswa kwesifo sikashukela se-steroid. Izidakamizwa zishintsha i-biochemistry yezinqubo ezenzeka emzimbeni wethu, zivusa i-hyperglycemia ezinzile:
Zithinta ukusebenza kwamangqamuzana we-beta, ngenxa yokuthi kuncishiswa ukwakheka kwe-insulin, ukuphuma kwawo egazini kuyacindezelwa ngenxa yokudla kweglucose.
Kungadala ukufa okukhulu kwamaseli we-beta.
Yehlisa ukusebenza kwe-insulin futhi, ngenxa yalokho, kukhubazeka ukudluliswa kwe-glucose kwezicubu.
Yehlisa ukwakheka kwe-glycogen ngaphakathi kwesibindi nemisipha.
Vimbela umsebenzi we-enteroglucagon we-hormone, ophinda unciphise ukukhiqizwa kwe-insulin.
Bandisa ukukhishwa kwe-glucagon, i-hormone esenza buthaka imiphumela ye-insulin.
Yenza kusebenze i-gluconeogenesis - inqubo yokwenziwa kwe-glucose kusuka kumakhompiyutha emvelo engeyona eye-carbohydrate.
Ngakho-ke, ukukhiqizwa kwe-insulin kuncishiswa kakhulu, ngakho-ke ushukela awukwazi ukufinyelela emgomweni wawo - kumaseli womzimba. Ukugeleza kweglucose egazini, ngakolunye uhlangothi, kuyanda ngenxa ye-gluconeogeneis kanye nokuncipha kokufakwa kweshukela ezitolo.
Kubantu abane-metabolism enempilo, ukuhlanganiswa kwe-insulin kuyanda ngemuva kwezinsuku ezingama-2-5 zokuthatha ama-steroid ukunxephezela umsebenzi wayo oncishisiwe.
Ngemuva kokuyekiswa komuthi, amanyikwe abuyele kusisekelo. Ezigulini ezinobungozi obukhulu besifo sikashukela se-steroid, isinxephezelo singase singanele, i-hyperglycemia yenzeka.
Leli qembu livame ukuba nokuqhekeka okuholela kwisifo sikashukela esingamahlalakhona.
Lesi sifo sinikezwa ikhodi ye-ICD ye-10 E11 uma umsebenzi we-pancreatic ulondolozwa ngokwengxenye, no-E10 uma amaseli e-beta ebhujiswa ngaphambili.
Izici nezimpawu zesifo sikashukela se-steroid
Zonke iziguli ezithatha ama-steroid kufanele zizazi izimpawu eziqondene noshukela:
i-polyuria - ukwanda kokuchama,
i-polydipsia - ukoma okunamandla, cishe okungenzi buthaka ngemuva kokuphuza,
ulwelwesi olomile, ikakhulukazi emlonyeni,
isikhumba esithambile, esingenangqondo
isimo sokukhathala njalo, ukusebenza okunciphile,
ngokuntuleka okukhulu kwe-insulin - ukunciphisa umzimba ngokweqile.
Uma lezi zimpawu zenzeka, kuyadingeka ukuthola isifo sikashukela. Ukuhlolwa okubucayi kakhulu kuleli cala uvivinyo wokubekezelela ushukela.
Kwezinye izimo, kungakhombisa ushintsho ku-carbohydrate metabolism ngokushesha njengamahora angama-8 ngemuva kokuqala kokuthatha ama-steroid. Izindlela zokuhlonza ziyefana nakwezinye izinhlobo zesifo sikashukela: ushukela ekugcineni kokuhlolwa akufanele ube ngaphezulu kuka-7.8 mmol / l.
Ngokukhuphuka kokugxilwa kumayunithi ayi-11.1, singakhuluma ngokuphazamiseka okubalulekile kwe-metabolic, okuvame ukungaphenduki.
Ekhaya, isifo sikashukela esingahle sitholakale sisebenzisa i-glucometer, izinga elingaphezulu kwe-11 ngemuva kokudla libonisa ukuqala kwalesi sifo. Ushukela wokuzila uyakhula ngokuhamba kwesikhathi, uma lungaphezulu kwamayunithi ayi-6.1, udinga ukuxhumana ne-endocrinologist ukuze uthole ukuhlolwa nokwelashwa okwengeziwe.
Ngabe uhlushwa umfutho wegazi ophakeme? Uyazi ukuthi umfutho wegazi ophakeme uholela ekuhlaselweni yinhliziyo nemivimbo? Shintsha ingcindezi yakho nge ... Umbono nempendulo mayelana nendlela efundwe lapha >>
Izimpawu zesifo sikashukela kungenzeka zingabi bikho, ngakho-ke kuyisiko ukuphatha ushukela wegazi ezinsukwini ezimbili zokuqala ngemuva kokuphathwa kwe-glucocorticoids. Ngokusebenzisa isikhathi eside kwezidakamizwa, ngokwesibonelo, ngemuva kokudluliswa, izivivinyo zinikezwa masonto onke phakathi nenyanga yokuqala, bese kuthi emva kwezinyanga ezintathu nezinyanga eziyisithupha, kungakhathalekile ukuba khona kwezimpawu.
Ungasiphatha kanjani isifo sikashukela se-steroid
Ishukela likashukela libangela ukwanda kakhulu koshukela ngemuva kokudla. Ebusuku nasekuseni ngaphambi kokudla, i-glycemia ijwayelekile okokuqala ngqa.Ngakho-ke, ukwelashwa okusetshenzisiwe kufanele kunciphise ushukela phakathi nosuku, kodwa ungavusi i-hypoglycemia yangemuva kosuku.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela i-mellitus, kusetshenziswa izidakamizwa ezifanayo nakwezinye izinhlobo zesifo: ama-hypoglycemic agents kanye ne-insulin. Uma i-glycemia ingaphansi kuka-15 mmol / l, ukwelashwa kuqala ngezidakamizwa ezisetshenziselwa isifo sikashukela sohlobo 2. Izinombolo zikashukela eziphezulu zibonisa ukonakala okukhulu ekusebenzeni kwe-pancreatic, iziguli ezinjalo zinqunywe imijovo ye-insulin.
I-Metformin Kuthuthukisa ukuqonda kwe-insulin, kunciphisa i-gluconeogeneis.
Izinsizakalo ze-sulfanylureas - glyburide, glyclazide, repaglinide Ungabeki izidakamizwa zesenzo eside, ukuqapha imvamisa yokudla kuyadingeka.
I-Glitazones Khulisa ukuzwela kwe-insulin.
Analogs of GLP-1 (enteroglucagon) - exenatide, liraglutide, lixisenatide Isebenza kangcono kunesifo sikashukela sohlobo 2, sandisa ukukhishwa kwe-insulin ngemuva kokudla.
I-DPP-4 inhibitors - sitagliptin, saxagliptin, alogliptin Yehlisa amazinga kashukela, ukhuthaze ukunciphisa umzimba.
Ukwelashwa kwe-insulin, kuye ngezinga le-insulin yabo, kukhethwe uhlobo lwendabuko noma olunamandla I-insulin esebenza njenge-insulin imvama futhi inqunyelwe ngaphambi kokudla.
Ukuvimbela nokutholwa kwesifo sikashukela okuyisikhathi esifanele kuyingxenye ebalulekile yokwelashwa ngama-glucocorticoids, ikakhulukazi lapho kulindeleke ukusetshenziswa kwawo kwesikhathi eside. Izinyathelo ezifanayo ezisetshenziselwa isifo sikashukela sohlobo 2, ukudla okune-carb ephansi kanye nokuzivocavoca okwenyukayo, kunciphisa ingozi yokuphazamiseka kwe-carbohydrate metabolism.
Ngeshwa, le prophylaxis kunzima ukuyifinyelela, ngoba ama-steroid andisa isifiso sokudla, futhi izifo eziningi eziziphatha zibakhipha noma zibeke umngcele kakhulu kwezemidlalo. Ngakho-ke, ekuvinjelweni kwesifo sikashukela se-steroid, indima eyinhloko ingeyokuxilongwa kokuphazamiseka kanye nokulungiswa kwabo ezingeni lokuqala ngosizo lwemithi enciphisa ushukela.
Qiniseka ukuthi ufunda! Ngabe ucabanga ukuthi amaphilisi ne-insulin kuyindlela kuphela yokugcina ushukela ulawulwa? Hhayi iqiniso! Ungakuqinisekisa lokhu ngokwakho ngokuqala ukusebenzisa ... funda kabanzi >>
Amathebulethi e-Dexamethasone - imiyalo esemthethweni yokusetshenziswa, ama-analogues
Isifo sikashukela seSteroid sibonisa izakhiwo zazo zombili izinhlobo 1 no-2. Kuyafana nohlobo 1 ngoba amaseli e-beta onakaliswa yi-corticosteroids emanyikwe.
Kepha nakulesi simo, ukukhiqizwa kwe-insulin kusaqhubeka. Ngokuhamba kwesikhathi, inani laso liyancipha futhi ngasikhathi sinye, amangqamuzana omzimba kancane ayeka ukubona le hormone, ejwayelekile kohlobo 2 sikashukela.
Ngokushesha wonke amangqamuzana e-beta alimele ayafa. Futhi ngokuya ngokuthi bahlala kumanyikwe ngamanani athile noma cha, i-insulin ingakhiqizwa ngemithamo emincane kakhulu, namanje enganele.
Isiguli sidinga i-insulin ngemijovo, futhi lokhu sekuvele kunguhlobo loku-1 (oluthembele kwe-insulin).
Isifo sikashukela sokwelapha sinezimpawu ezifanayo nezinhlobo ezaziwayo:
Izici zesifo nezimpawu
Isifo sikashukela seSteroid sikhethekile ngoba sihlanganisa nezimpawu zesifo sikashukela sohlobo 2 nesifo sikashukela 1. Lesi sifo siqala lapho inani elikhulu lama-corticosteroids liqala ukonakalisa amaseli e-pancreatic beta.
Lokhu kuyahambisana nezimpawu zesifo sikashukela sohlobo 1. Kodwa-ke, amaseli we-beta ayaqhubeka nokukhiqiza i-insulin isikhathi esithile.
Kamuva, umthamo we-insulin uyancipha, ukuzwela kwezicubu kuleli hormone nakho kuyaphazamiseka, okwenzeka ngesifo sikashukela 2.
Ngokuhamba kwesikhathi, amangqamuzana e-beta noma amanye awo ayachithwa, okuholela ekumeni lapho kwenziwa i-insulin. Ngakho-ke, lesi sifo siqala ukuqhubeka ngokufanayo nesifo sikashukela esijwayelekile esincike ku-insulin 1. Ukubonisa izimpawu ezifanayo.
Izimpawu ezibalulekile zesifo sikashukela esifana nehlobo lwesifo sikashukela:
Imvamisa, izimpawu ezisohlwini azikhombisi okuningi, ngakho-ke akuvamile ukuba zinakwe. Iziguli zehliselwa isisindo ngendlela ephakeme, njengoba kuhlobo 1 sikashukela, ukuhlolwa kwegazi akuhlali kwenza ukuthi kwenzeke ukuxilongwa.
Ukuxhuma ushukela egazini nomchamo kuyinto ephakeme ngokungavamile. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona kwezinombolo zemikhawulo ye-acetone esegazini noma umchamo akuvamile ukubonwa.
Uma umzimba usuvele ungakhiqizi i-insulin, khona-ke isifo sikashukela sodokotela, njengohlobo 1 sikashukela, kodwa sinezimpawu zesifo sikashukela sohlobo 2, okungukuthi, ukumelana ne-insulin kwezicubu. Isifo sikashukela esinjalo siphathwa njengesifo sikashukela 2.
Ukwelashwa kuncike, phakathi kwezinye izinto, kulokho ngqo ukuphazamiseka kweziguli onakho. Isibonelo, kubantu abakhuluphele abasakhiqiza i-insulin, kukhonjiswa izidakamizwa zokunciphisa kanye noshukela ezifana ne-thiazolidinedione ne-glucophage. Ngaphezu kwalokho:
Uma kunomsebenzi we-pancreatic onciphile, khona-ke ukwethulwa kwe-insulin kuzomnika ithuba lokunciphisa umthwalo.
Endabeni ye-atroph engaphelele yamaseli we-beta, ngokuhamba kwesikhathi, umsebenzi we-pancreatic uqala ukululama.
Ngenhloso efanayo, kudliwe isidlo esiphansi se-carb.
Kubantu abanesisindo esijwayelekile, kunconywa ukudla oku-9; abantu abakhuluphele ngokweqile kufanele banamathele ekudleni uNo. 8.
Uma ama-pancreas engakhiqizi i-insulin, khona-ke inqunywe ngomjovo futhi isiguli sizodinga ukwazi ukuthi singawujova kanjani kahle i-insulin. Ukulawula ushukela wegazi nokwelashwa kwenziwa ngendlela efanayo nesifo sikashukela 1. Ngaphezu kwalokho, amangqamuzana e-beta afile awakwazi ukubuyiselwa.
Icala elihlukile lokwelashwa kwesifo sikashukela esifakwe izidakamizwa yilesi simo lapho kungenakwenzeka ukwenqaba ukwelashwa kwe-hormone, kepha umuntu uba nesifo sikashukela. Lokhu kungaba ngemuva kokufakelwa kwezinso noma lapho kukhona isifuba somoya esibuhlungu.
Izinga likashukela ligcinwa lapha, lisuselwa ekuphepheni kwama-pancreas kanye nezinga le-tiscctibility yezicubu ze-insulin.
Njengokusekelwa okwengeziwe, iziguli zingabekwa amahomoni ama-anabolic alinganisa imiphumela yamahomoni e-glucocorticoid.
Isifo salolu hlobo sitholakala uma amanani eglucose egazi eqala ukwedlula ama-11.5 mmol ngemuva kokudla, nangaphambi kokudla, izilinganiso zikhonjiswa zingaphezulu kuka-6 mmol. Esigabeni sokuqala, udokotela kumele azikhiphe zonke izifo ezifanayo ezikuleli qembu.
Ukwelashwa kungaba yindabuko noma kubukhali. Elesibili lisebenza kakhudlwana, kepha kudinga amakhono okuzibamba avela esigulini futhi kubhekwa njengokubiza kakhulu ngokwezezimali.
I-Steroid sikashukela i-mellitus, izimbangela zayo kanye nezimpawu
Uhlobo lwesifo esincike e-insulin alwenzeki ngenxa yokungondleki kahle noma ukukhuluphala ngokweqile. Njengomthetho, isizathu esiyinhloko ukusetshenziswa okuhlala isikhathi eside kwezidakamizwa ze-hormonal. Kungakho ifomu libizwa ngokuthi isifo sikashukela sezidakamizwa.
I-Steroid sikashukela i-mellitus emithini kuthiwa yizinhlobo ezingekho pancreatic zalesi sifo. Ngakho-ke, esigabeni sokuthuthuka, ayihlotshaniswa nganoma iyiphi indlela nokusebenza kabi kwamanyikwe futhi, iziqhingi zeLangerhans.
Uma umuntu engenakho ukuphazamiseka ekusebenzeni kwe-carbohydrate ezingeni lamaselula, futhi kwenzeka ngokweqile kwe-glucocorticoids, khona-ke isifo sikashukela se-steroid sivame ukwenzeka ngesimo esilinganayo. Ekupheleni kwenkambo yokwamukelwa kwemithi yama-hormonal, lesi sifo siyanyamalala.
Isifo sikashukela sohlobo II, esibonakaliswa inani elanele lamahomoni akhiqizwayo, ngaphezu kwengxenye yeziguli ngokuhamba kweminyaka zingena kwifomu elincike ku-insulin.
Izidakamizwa ezidala izifo
I-Glucocorticoids. I-Dexamethasone, i-hydrocortisone kwezokwelapha isetshenziswa njenge-anti-inflammatory for arthritis, kanye nasekwelapheni izifo ze-autoimmune (eczema, lupus, nabanye) kanye ne-asthma.
Kuyaqabukela, ukwelashwa akufaki i-glucocorticoids ngemuva kokuxilongwa kwe-multiple sclerosis.
Amaqembu e-diuretic we-thiazide diuretics (Nefrik, Dichlothiazide).
Izindlela eziningana zokuvimbela inzalo ze-hormonal.
Izidakamizwa ezisetshenziselwa ukwelashwa ngemuva kokuhlinzwa kwezinso, ikakhulukazi ukufakelwa. Ngemuva kokufakelwa, umuntu kufanele athathe ama-immunomodulators impilo yakhe yonke, ngoba athambekele ezinqubweni zokuvuvukala emzimbeni.
Kaningi, zisongela impilo yesitho esidlulisiwe.
Vele, i-mellitus yesifo sikashukela ayenzeki kuzo zonke iziguli ezithatha ama-hormone, kodwa noma kunjalo, ukwelashwa okunjalo kwandisa ubungozi.
Uma umuntu ophikisana nesizinda sale mishanguzo ebenezimpawu zefomu lesifo, khona-ke kungenzeka ukuthi ekuqaleni ubesengozini. Ukuze ugweme ukuthuthuka kwayo, kuyalulekwa ukuletha isisindo sakho kumazinga ajwayelekile, shintsha indlela odla ngayo futhi ungene kwezemidlalo.
Ukubonakaliswa kokuqala kufanele kuphoqelele ukumisa ukusetshenziswa okujwayelekile kwama-hormone, uma kungenzeka esimweni esithile.
Izimpawu eziphambili nezimpawu ezithile
Isici esihlukile ukuhlanganiswa kwezakhiwo zombili izinhlobo zesifo sikashukela. Esigabeni sokuqala sokuthuthuka, i-corticosteroids eyeqile iqala ukulimaza amaseli we-beta agxila kuma-islets aseLangerhans, ahlobene nesifo sikashukela se-steroid enefomu elincike ku-insulin. Ngaphandle kwalokhu, basaveza ama-hormone.
Kepha imvamisa yokukhiqizwa kwe-insulin iyancipha, ukuzwela kwamangqamuzana kuyo kuyancipha, njengakuhlobo lwesibili. Ngokuhamba kwesikhathi, amangqamuzana e-beta ayeka ukusebenza futhi afe, ngokulandelana, lesi sifo siya ngokuya sifana nesithombe esijwayelekile se-insulin-sosifo.
Izimpawu zifana kakhulu nenkambo ejwayelekile yesifo:
ukukhathala, ukusebenza okwehlile,
Kwezinye izimo, isiguli asikuboni ngisho nokubonakala kwabo, ngoba baziveza buthaka. I-Corticosteroids ayikaze ivuse ukulahleka okubukhali kwesisindo somzimba noma inzuzo yayo, futhi ukuhlolwa kwegazi kwenza ukuthi kutholakale ukuxilongwa okuqondile. Ukuqunjelwa ushukela kumchamo nokuphuma kwegazi kuyaqabukela, i-acetone ayibonakali kangako ekuhlaziyeni.
Isifo sikashukela njengesizathu se-steroid
Ngokwayo, ukweqiwa kwe-corticosteroids kuthinta isimo somuntu ngendlela efanayo. Ngaphezu kwalokho, akuwona wonke umuntu ozithathayo ogula. Lawa ma-hormone awasebenzi kuphela kumanyikwe umuntu, kepha futhi anciphisa ukusebenza kwe-insulin, ngokumane ayiphambanise.
Amaseli weBeta asebenza ngamandla amakhulu ukuze alondoloze amazinga evamile kashukela. Uma ama-pancreas enempilo, khona-ke maduze nje azosetshenziswa imithwalo esindayo. Ngokuncipha komthamo noma ukuhoxiswa ngokuphelele kwezidakamizwa, zonke izinqubo ze-metabolic zibuyiselwa ngokuphelele.
Kodwa uma umuntu othatha ama-hormone enesifo sikashukela, isithombe sihluke ngokuphelele. Amaseli asevele alahlekelwe umuzwa we-insulin, ngokulandelana, i-pancreas ayenzi ngokuphelele umsebenzi wayo. Ngalesi sizathu, kungakuhle ukuthi abanesifo sikashukela basebenzise ama-corticosteroids kuphela ezimweni ezihlukile.
Icala elihluke ngokuphelele yilapho kungenakwenzeka ukwenqaba ama-hormone, ngokwesibonelo, uma kunesifo somoya somoya esibuhlungu kakhulu. Lapha, isiguli kuzodingeka siqaphe ngokucophelela izinga le-glucose, kanye nesiphuzo i-anabolics engathathi hlangothi imiphumela emibi ye-glucocorticoids.
Izimbangela kanye Ukwelashwa kwesifo sikashukela seSteroid
Isizathu sokuvela kohlobo lwesibili se-insulin-exhomeke ku-1 isifo sikashukela i-corticosteroids (ama-hormone e-adrenal cortex) egazini.
Isifo sikashukela seSteroid singabonakala njengengxaki yezifo, phakathi lapho kunesilinganiso esikhulayo sama-corticosteroids (isifo se-Itsenko-Cushing).
Imbangela enkulu yalesi sifo ukwelashwa okuhlala isikhathi eside nezidakamizwa ezithile ze-hormonal.
Isifo sikashukela seSteroid yi-extrapancreatic emvelweni ngoba ayidalwa yizinkinga zepancreatic. Iziguli ezingenakho ukwephula i-carbohydrate metabolism, kepha ezisebenzisa ngokweqile ama-glucocorticoids, ziqala ukuba nesifo sikashukela ekubonakalisweni okuncane okunyamalala ngemuva kokuyekiswa kwemithi ye-hormonal.
Kufika kuma-60% eziguli zohlobo lwesibili ezisengcupheni yokuthola ukuxhomekeka kwe-insulin kulesi sifo sefomu le-steroid.
I-Glucocorticoids (dexamethasone, prednisone, hydrocortisone) isetshenziselwa ukulwa nezinqubo zokuvuvukala ekwelapheni i-asthma ye-bronchial, i-rheumatoid arologist, izifo ezithile ze-autoimmune, njenge-lupus erythematosus, eczema, pemphigus.
Ama-corticosteroids asetshenziswa ekwelapheni i-sclerosis eminingi nezinye izifo ezithile zemizwa.
Izidakamizwa ze-Corticosteroid zisetshenziselwa isenzo sokulwa nokuvuvukala, ngemuva kokudluliselwa kwezinso, lapho le mithi inqunyelwe ukucindezela ukungatheleleki komzimba.
Isifo sikashukela seSteroid asibonakali kuwo wonke umuntu othatha ama-corticosteroids, kepha izingozi zokugula zanda kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, lesi sifo singakhula ngenxa yokusebenzisa isikhathi eside izidakamizwa ze-hormonal kanye ne-diuretics (hypothiazide, nvidrex, nephrix, dichlothiazide).
Uma kuvela izimpawu ngesikhathi sokwelashwa ngezidakamizwa ze-corticosteroid, kumele kuthathwe izinyathelo zokuthibela. Lezi zinyathelo zifaka: ukondleka okufanele, ukuvivinya umzimba ngokufanele.
Abantu abahlushwa ukukhuluphala kufanele banciphise isisindo sabo sibe ngamazinga ajwayelekile.
Uma unqunyelwe isifo sikashukela, kufanele uqaphele kakhulu ngokuthatha izidakamizwa ze-hormonal.
Ishukela likashukela lifaka izici zombili izinhlobo zokuqala nezesibili. Lesi sifo sihambisana nomonakalo we-pancreatic b-cell yi-corticosteroids (njengasezinhlotsheni 1 zikashukela). Ngasikhathi sinye, ama-b-cell okwesikhathi esithile aqhubeka nokufihlwa kwe-insulin.
Kamuva, inani le-insulin liyancipha, ukusabela kwezicubu kwi-hormone nakho kuyancipha (njengoba kunjalo ngohlobo lwesibili). Ngokuhamba kwesikhathi, ama-b-cell abhujiswa ngokuphelele noma ngokwengxenye, ukugcinwa kwe-insulin kuyaphela.
Kusukela manje kuqhubeke, ushukela wezidakamizwa uyaqhubeka ngendlela efanayo nesifo sikashukela sohlobo 1.
Imvamisa, izimpawu zesifo zilula, azithathwa ngokungathi sína. Ngokuphikisana nokuthayipha isifo sikashukela sokuqala, abantu abanesifo sikashukela abanenkinga yokuthola isisindo esisheshayo. Ukuhlolwa kwegazi akuvezi ngaso sonke isikhathi ukuba khona kwalesi sifo, ngoba amazinga kashukela ne-acetone kumchamo negazi ngokuvamile awudluleli ngokwejwayelekile.
Yize amazinga e ngokweqile ama-adrenal mahomoni eyisici esiyingozi, akuzona zonke iziguli ezithatha izidakamizwa ze-corticosteroid ziyagula. I-Corticosteroids yenza ngezindlela ezimbili: zithinta ama-pancreas futhi igweme umphumela we-insulin. Kulokhu, ukuze kugcinwe ushukela wegazi ojwayelekile, ama-pancreas asebenza ngezinga okungenzeka ngalo.
Isikhathi esithile, i-pancreas iyakwazi ukubekezelela leli jubane, ngakho-ke ngemuva kokuqedwa kwenkambo ye-corticosteroids, izinkinga ze-metabolic ziyanyamalala. Esikhathini sikashukela, ukusabela kwezicubu ekusebenzeni kwe-insulin nomsebenzi we-pancreatic kukhubazeka. Kulokhu, ama-corticosteroids angathathwa kuphela uma kubangelwa isidingo esibalulekile.
Izici Ezinobungozi Obukhulu:
Ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwama-corticosteroids,
Ukuthatha ama-steroid ngemithamo ephezulu,
Ngezikhathi ezithile amazinga kashukela wegazi aphakama ngezizathu ezingaziwa
Ukuba khona kokukhuluphala kwanoma iliphi ibanga.
Kwenzeka ukuthi ukusetshenziswa kwe-glucocorticoids kuvusa ukubonakaliswa kwesifo sikashukela, ebesingaziwa ngaphambili ngenxa yobuthakathaka noma ukungabikhona kwezimpawu zaso.
Esimweni esinjalo, kunethuba lokuwohloka okubukhali esimweni sesiguli noma ukukhohlakala.
Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala inkambo yokwelashwa ngama-steroid (izindlela zokuvimbela inzalo, ama-diuretic thiazides), abantu abakhuluphele, kanye nabantu beqembu labantu abadala, kufanele bahlolwe isifo sikashukela.
Lapho secretion ye-insulin ime emzimbeni, lesi sifo sidlula ngendlela efanayo nesifo sikashukela sohlobo lokuqala, kodwa kunezimpawu zohlobo lwesibili, okungukuthi, ukumelana ne-insulin kwezicubu. Isifo sikashukela seSteroid selashwa kanye nesifo sohlobo lwesibili. Izindlela zokwelashwa zincike ekubonisweni kwesifo okukhethekile.
Imithamo emincane ye-insulin kwesinye isikhathi ibekiwe. Umsebenzi we-pancreatic ongavinjelwe udinga ukusetshenziswa kwe-insulin njengenqubo yokusekela.
Ngenxa yalokhu, insimbi isebenza ngomthwalo omncane, futhi uma kusekhona ama-b-cell "aphilayo", kungenzeka ukubuyisela ama-pancreas.
Ngezinhloso zokwelapha, ukudla okunama-carbohydrate amaningi kunqunyelwe: uma isisindo sijwayelekile - ukudla 9, kulabo abahlupheka ngokweqile - ukudla kwe-8.
Amazinga kashukela nokwelashwa kuyafana nokwelapha isifo sikashukela sohlobo 1. Njengasesimweni salesi sifo, ukubuyiselwa kwemisebenzi yama-b-cell akunakwenzeka.
Kunezimo lapho ukwenqaba ukwelashwa kwe-hormonal kungenakwenzeka, ngokwesibonelo, ngemuva kokufakelwa kwezinso noma ezigulini ze-asthmatic. Ezimweni ezinjalo, isimo se-pancreas kanye nokuphendula kwezicubu ku-insulin kuyabhekelelwa ukuze kugcinwe amanani ashukela afunwayo. Phakathi kwezinye izidakamizwa, iziguli zine-anabolics ebekiwe ezinxenxa imiphumela ye-glucocorticoids.
Isifo sikashukela seSteroid: izimbangela
I-Steroid sikashukela i-mellitus, noma i-mellitus 1 yesifo sikashukela esekela i-insulin, ivela ngenxa yamazinga okweqile kwama-hormone egazini le-adrenal cortex - corticosteroids.
Kwesinye isikhathi kukhula kube yinkinga yezinkinga lapho kukhiqizwa khona la mahomoni, ngokwesibonelo, isifo se-Itsenko-Cushing,. Kepha imvamisa, lesi sifo sizenza sizizwe ngemuva kokuthola ukwelashwa isikhathi eside ngemithi ethile yama-hormonal, ngakho-ke elinye lamagama alo yisifo sikashukela sezidakamizwa.
Ngomsuka wayo, isifo sikashukela se-steroid sibhekisa ezinhlotsheni zesifo esivela ngaphandle, okusho ukuthi, ekuqaleni asihlotshaniswa nokuphazamiseka kwamanyikwe.
Kubantu abangenawo umdlandla we-carbohydrate metabolism, onokweqisa kwezidakamizwa zama-adrenal mahormone (glucocorticoids), avela ngendlela emnene bese enyamalala ngemuva kokuba ekhanseliwe. E-60% yeziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2, lesi sifo singavusa ukuguquguquka kwefomu elizimele le-insulin libe elithembele ku-insulin.
Yimiphi imithi ebangela ushukela onesifo soshukela?
Izidakamizwa ze-Glucocorticoid - Hydrocortisone, Prednisolone, Dexamethasone - zisetshenziswa njengezidakamizwa ezilwa nokuvuvukala zesifo samathambo, ekwelapheni i-asthma ye-bronchial kanye nezinye izifo ze-autoimmune.
Lokhu, isibonelo, i-lupus erythematosus, i-pemphigus, i-eczema. Zisetshenziswa futhi ekwelapheni izifo zemizwa ezinjenge-multiple sclerosis ..
Amanye ama-diuretics, afana ne-thiazide diuretics Dichlothiazide, iHypothiazide, iNephrix, iNavidrex, amanye amaphilisi okulawula ukuzalwa kwama-hormonal, angaba imbangela yesifo sikashukela sezidakamizwa.
Imithamo emikhulu ye-corticosteroids nayo isetshenziselwa ukwelashwa okulwisa ukuvuvukala ngemuva kokufakelwa kwezinso.
Ngemuva kokufakelwa, abantu baphuza izidakamizwa ukuze bacindezele ukungatheleleki kokuphila, ngakho-ke ukuvuvukala okuthe xaxa kuvame kakhulu kubo, futhi okokuqala basongela isitho esidlulisiwe.
Isifo sikashukela sokwelapha asiveli kuzo zonke iziguli, kodwa ngenxa yokudla okungapheli kwama-hormone, amathuba aso kuleli cala aphezulu kunangesikhathi belapha ezinye izifo.
Izimpawu zesifo sikashukela esivele ngenkathi kuthathwa ama-steroid zikhombisa ukuthi laba bantu basengozini.
Ukuze bangaguli, abantu abakhuluphele kufanele balethe isisindo sabo ngokujwayelekile, futhi labo abanesisindo esijwayelekile kufanele banake ukuzivocavoca umzimba futhi bathuthukise nokudla kwabo. Njengoba usufundile ngokwanda kwakhe kokuthi "isifo sikashukela", awukwazi ukuthatha noma yiziphi izidakamizwa ze-hormonal ngokungalawuleki.
Izici zesifo sikashukela se-steroid ukuthi zihlanganisa izakhiwo zombili zesifo sikashukela sohlobo 1 nesifo sikashukela 2. Kuqala ngeqiniso lokuthi ukugcwala ngokweqile kwama-corticosteroids kulimaza amaseli we-beta we-pancreas (njengakuhlobo lwesifo sikashukela 1), yize eqhubeka nokukhiqiza i-insulin isikhathi eside .
Lapho-ke inani le-insulin liyancipha, kuyilapho ukuzwela kwezicubu zomzimba kule hormone kuphazamiseka (njengakuhlobo 2 sikashukela). Kancane kancane, amangqamuzana e-beta noma ingxenye yawo ayabhujiswa futhi ayeke ukukhiqiza i-insulin, futhi lesi sifo siqala ukuqhubeka ngendlela efanayo nesifo sikashukela esivamile esincike ku-1.
Izimpawu eziphambili zesifo sikashukela i-mellitus ngokuyisisekelo ziyefana nanganoma uluphi uhlobo lwesifo sikashukela - ukoma, ukwanda kokuchama, ukukhathala. Kepha, njengomthetho, ababuthakathaka, futhi kwesinye isikhathi abanaki.
Ngokungafani nesifo sikashukela sohlobo loku-1 esivamile, iziguli azinaso isisindo esisheshayo, futhi ngisho nokuhlolwa kwegazi akuhlali kukuvumela ukuthi usheshe uthole isifo.
Izinga likashukela wegazi noshukela emchameni akuvamile ukufinyelela umkhawulo, ukuba khona kwe-acetone egazini nomchamo kumane nje kungamanani.
Isifo sikashukela njengengozi eyingozi yesifo sikashukela se-steroid
Ama-hormone we-adrenal ngokweqile afanayo kubo bonke abantu. Kungani kungewona wonke umuntu othatha ama-glucocorticoids agule ngesifo sikashukela se-steroid? Ama-corticosteroids, ngakolunye uhlangothi, enza ngokusetshenziswa kwamanyikwe, okwesibili, "enza" isenzo se-insulin silinganiselwe. Ngakho-ke, ukuze izinga loshukela wegazi lihlale lijwayelekile, ama-pancreas ayaphoqelelwa ukuthi asebenze kuze kube sekupheleni.
Ama-pancreas omuntu onempilo okwesikhashana abhekane nomthwalo owandayo, futhi lapho nje eyeka ukuthatha ama-steroid noma anciphise umthamo, ukuphazamiseka kwe-metabolic kuzonyamalala.
Kepha uma unesifo sikashukela, khona-ke imizwa yezicubu ukuya ku-insulin isivele incishisiwe, futhi amanyikwe awasakwazi ukubhekana ngokuphelele nemisebenzi yawo.
Ngakho-ke, ungelashwa ngama-steroid kuphela ngenxa yezizathu zempilo. Ingozi inyuka:
nokusetshenziswa okungapheli kwama-steroid,
uma kungenzeka zisetshenziswe ngemithamo ephezulu,
phambi kwesisindo ngokweqile.
Udinga ukuthi uqaphele futhi kulabo, ngezizathu ezingachaziwe, ngezikhathi ezithile bakhuphula ushukela wegazi. Kwesinye isikhathi uma usebenzisa i-glucocorticoids, isifo sikashukela sivele, okuyinto isiguli esingazi ngayo, ngoba imnene.
Kulesi simo, izidakamizwa ze-hormonal zingasenza sibe nzima lesi simo futhi ziholele ngisho nasekondeni.
Ngakho-ke, ngaphambi kokuyalela izidakamizwa ze-hormonal ezingahambisani nokwelashwa (amaphilisi okulawula inzalo, ama-diuretics eqembu le-thiazide), abesifazane abakhuluphele ngokweqile kanye nabantu asebekhulile kudingeka bahlolwe isifo sikashukela esiseza.
I-Ultrasound yemithambo enikeza igazi emilenzeni
Ukuskena i-Duplex (i-ultrasound) yemithambo yemikhawulo engezansi - isetshenziselwa ukuhlola isimo sokuphuma kwegazi ngaphambi nangemva kokwenza ukuhlinzwa emithanjeni. Le ndlela inyusa amathuba wokuthi izokwazi ngesikhathi esifanele ukuthola ukuthikamezwa kwe-artery yi-thrombus noma ukuphindwa okunciphisiwe kwe-lumen emikhunjini ngemuva kokuhlinzwa (restenosis).
I-Ultrasound yemithambo yegazi ikuvumela ukuthi ufunde izindawo ezinenkinga, okungukuthi, izingxenye “ezivaliwe” emthanjeni wegazi ngenxa yokuqalwa kwesifo. Usebenzisa le ndlela, ungabheka kahle isimo semikhumbi bese uhlela kusengaphambili kokusebenza ukuze ubuyisele ubunikazi babo.
I-angiography ephikisana ne-X-ray
I-X-ray umehluko we-angiography kuyindlela yokuhlola lapho umenzeli ohlukile afakwa khona egazini, bese izitsha "ziguqukela" ngama-x-ray. I-Angiography isho "ukuhlolwa kwemithambo yegazi". Le ndlela iyindlela yokufundisa kunazo zonke. Kepha akumjabulisi isiguli, futhi okubaluleke kakhulu - ukuthi umphikisi ongafani naye angalimaza izinso. Ngakho-ke, kunconywa ukuyisebenzisa kuphela lapho kunqunywa umbuzo wokwenza ukuhlinzwa ukuze ubuyisele i-vasency patency.
Izigaba zesifo sikashukela emilenzeni
Kunama-degree ama-3 wokuphazamiseka kwegazi okugelezayo ezigulini ezinesifo sikashukela mellitus.
I-1st degree - azikho izimpawu nezimpawu zesifo segazi sezinsimbi emilenzeni:
Ukuzwakala kwe-arterial pulsation kuyezwakala
inkomba ye-ankle-brachial ye-0.9-1.2,
inkomba ehlombe lomunwe> 0,6,
isilinganiso sokulinganisa okuguqukayo> 60 mmHg. Ubuciko.
I-2nd degree - kunezimpawu noma izimpawu, kepha azisekho indlala ebalulekile yomoya-mpilo wezicubu:
Ukudluliselwa kwemibono ngezikhathi ezithile (imilenze ebuhlungu)
inkomba ye-ankle-brachial engu-30 mm RT. Ubuciko.
transcutaneous oximetry 30-60 mm RT. Ubuciko.
I-3rd degree - i-oxygen ebalulekile yokufa yindlala kwezicubu (ischemia):
ingcindezi ye-systolic emithanjeni yomlenze ophansi Uyini ukwelashwa uma imilenze ilimala nesifo sikashukela
Uma imilenze yakho ilimala ngesifo sikashukela, khona-ke ukwelashwa kwenziwa ngezindlela ezi-3:
umthelela ezintweni ezivusa ukukhula kwe-atherossteosis, kufaka phakathi imithambo yemilenze,
ukuqaliswa ngokucophelela kwezincomo zokuvimbela nokwelashwa kwezinkinga zemilenze, okuxoxwa ngazo ngokuningiliziwe esihlokweni esithi "Diabetesic foot syndrome",
Isixazululo sendaba yokusebenza kokuhlinzwa ukuze kubuyiselwe ukuhamba kwegazi emithanjeni
Kuze kube muva nje, esigabeni sokukhalinyelwa kwezikhathi ezithile, iziguli zazinikezwe umuthi i-pentoxifylline. Kodwa ucwaningo luye lwabonisa ukuthi akukho nzuzo yangempela kwiziguli ezinesifo sikashukela esinesifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Ngezinkinga zesifo sikashukela emilenzeni, ukuhlinzwa ukuze kubuyiswe ukuhamba kwegazi emithanjeni kungaba usizo olukhulu. Odokotela banquma umbuzo wokuziphatha kwayo nesiguli ngasinye, becabanga izinkomba zakhe zobungozi zokungenelela kokuhlinzwa.
Iziguli ezinobuhlungu bomlenze kushukela, njengomthetho, ziye zasho ukuphazamiseka kwe-carbohydrate metabolism (ushukela wegazi uphezulu kakhulu), isifo sikashukela sonyawo lwesifo sikashukela, kanye nokubonakaliswa kwezinye izinkinga zesifo sikashukela. Ukuze ubasize ngempela, udinga ukubandakanya iqembu labachwepheshe bezokwelapha ekwelashweni.
Isifo sikashukela sonyawo sikashukela siphathwa ngudokotela wezimpawu ezikhethekile (hhayi ukuthi adideke nodokotela wezingane). Okokuqala, ukwelashwa kokuhlinzwa kwamanxeba onyaweni kungadingeka ukuvikela i-gangrene, futhi kuphela lapho - ukubuyiselwa kokuqina kwemithambo yegazi.
Isifo sikashukela nezomlenze: Okutholakele
Siyethemba ukuthi le ndatshana ikuchazele ngokuningiliziwe okufanele ukwenze uma imilenze yakho ilimala ngesifo sikashukela. Udinga ukushintshela empilweni enempilo ukuze ujwayele ushukela wegazi futhi uyeke ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis. Ngodokotela, uzokwazi ukunquma ngokuhlinzwa okuzobuyisa ubunikazi bemithambo yemilenze. Udinga nokuthi uhlolwe ukuze uthole ezinye izinkinga zesifo sikashukela bese uzelapha.
Uyacelwa ukuthi ungazami “ukudambisa” izinhlungu ezivela ku-lameness yangaphakathi ngosizo lwamaphilisi athile. Imiphumela yabo emibi ingasibhebhethekisa kakhulu isimo sakho kanye nesikhathi sakho sokuphila. Bonana nodokotela ofanelekayo. Esikhuweni sikashukela, kubalulekile ukukuhlanzisisa ngokucophelela ukuhlanzeka kwezinyawo ukuze ukwazi ukukwazi ukuzihambisa ngokwakho.
Ungawehlisela kanjani ushukela wegazi futhi uligcine lijwayelekile,
Ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 yikho okusebenzayo kakhulu
Ungawenza kanjani umjovo we-insulin ngaphandle kobuhlungu.